यस्तो ठाउँ जहाँ आफ्नै बाबुसँग गराइन्छ छोरीको बिहे ! भिडियो सहित – Tufan Media News
यस्तो ठाउँ जहाँ आफ्नै बाबुसँग गराइन्छ छोरीको बिहे ! भिडियो सहित
३ मंसिर २०७६, मंगलवार ११:२८
विश्वमा अनेक जातजाती तथा समुदाय छन् । उनीहरुका आ–आफ्नो चलन तथा रीतिरिवाज पनि छन् । सुन्दा पत्याउनै नसकिने कुरीतिहरु अझै प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । केही विस्थापन भए पनि केही प्रचलनलाई भने त्यस्ता समुदायले मान्दै आएका छन् । एउटा यस्तै रोचक प्रचलन बंगलादेशमा अझै रहेको बताइन्छ । जहाँ आफ्नै बाबुसँग छोरीको बिहे गराइन्छ । एक समुदायमा छोरीहरुलाई सानै उमेरमै आफ्नै बुवासँग बिहे हुने कुरा बताइन्छ र आफ्नै बाउसँग बिहे भएको सपना देखाइन्छ ।
बाल्यकाल देखिनै यस्तो कुरा सुनेर हुर्किएका छोरीहरुले जान्ने भैसक्दासम्म आफ्नो बुवालाई नै मानसिक रुपमा लोग्ने स्वीकार्ने अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छन् । बंगलादेशमा बस्ने एक आदिवासी समुदायमा यो प्रथा प्रचलित छ । त्यहाँको मण्डी जातिमा प्रचलित बाउले आफ्नै छोरीसँग बिहे गर्ने कुप्रथा रहेको छ । यो समुदायमा अर्को प्रथा पनि रहेको छ । जस अनुसार यदि कुनै महिलाको बिहे भएको छोटो समयमै लोग्नेको मृत्यु भएमा विधवा महिलाले लोग्नेका परिवारका कुनै पुरुष सदस्सँगै बिहे गर्नुपर्दछ ।
वर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीलाई जबरजस्ती करणी प्रयास गरेको अभियोगमा कात्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि जेल चलान भए । जिल्ला अदालत काठमाडौंले महरालाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्न आदेश दिएको थियो । बन्दीका रुपमा महराले जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।
जेल अन्य भीआईपी कैदीबन्दीभन्दा महराको दिनचर्या सामान्य रहेको डिल्लीबजार कारागार सदरखोरकी शाखा अधिकृत सीता अधिकारीले बताइन् । ‘महराज्यूको आनीबानीको बारेमा मैले आजै बुझेकी थिएँ, उहाँ सामान्य रुपमा दिनचर्या बिताइरहनुभएको छ,’ शाखा अधिकृत अधिकारीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘उहाँमा अन्य भीआईपी कैदी जस्तो घमण्ड पनि देखिएन ।’